Momba anay - Association of Accredited Translators and Interpreters of Madagascar
MOMBA NY AATIM
Ny AATIM dia fikambanana iray eto Antananarivo, Madagasikara, natsangana tamin’ny taona 2020, ary manaja ny lalàna mifehy ny Fikambanana eto Madagasikara.
Ny AATIM dia fikambanana natao mba hanomezan-danja kokoa ny asa fandikan-teny ary hanomezana sy hampivoarana kokoa ny fahaiza-manaon’ny mpandika teny tsirairay eto Madagasikara. Mampivondrona ny mpandika teny rehetra eto Madagasikara izy io.
Afaka ny ho mpikambana ao amin’ny AATIM izay rehetra misehatra amin’ny asa fandikan-teny.
AHOANA NO FOMBA FIASANAY
Ny fikambanan’ny mpandika teny Voamarina eto madagasikara dia fikambanana tsy mitady tombontsoa ary ny tanjony voalohany kosa dia ny hamporisika ny mpandika teny hanitatra ny fahaizany ary hampiroborobo ny asa fandikan-teny eto Madagasikara. Izany dia natao hanampy ireo miasa amin’io sehatra io hanana toerana eo amin’ny tsena nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ny Filan-kevim-pitantanana na Birao voafidy dia tompon’andraikitra amin’ny fitantanana sy fitarihana ny Fikambanana amin’ny hetsika tsirairay izay ataony. Roa taona ny fe-potoana iasan’ny mpikambana tsirairay ao amin’ny filankevim-pitantanana. Tsy karamaina na omena tambiny ireo mpikambana mpitantana amin’ny asa ataony.
Mivory intelo isan-taona farafahakeliny ny mpitantana ary afaka hatrehin’ny mpikambana rehetra ihany koa ny fivoriana.
Ny filankevim-pitantanana no mamaritra ny politika sy ny paikady ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny fitantanana AATIM dia etika, mangarahara ary mifanaraka amin’ny lalàna Malagasy.
Olona efa matihanina ireo mpiasan’ny AATIMary manome fanampiana ara-pitantanana sy fandaminana amin’izay rehetra ataon’ny AATIM, ny foiben-toeran’ny Fikambanana dia eny Malaza Ampitatafika, Antananarivo.
NY ZAVATRA ATOLOTRAY
AATIM dia manolotra fanohanana arak’asa sy tombontsoa ho an’ny mpikambana ao aminy.
Fianarana sy fiofanana Ny fikambanana dia manome fiofanana sy fampianarana ho an’ny mpandika teny rehetra izay maniry hampivelatra ny fahaizany ary hahazo fanamarinana ara-dalàna amin’io asa io.
Fanamarinana. AATIM dia manolotra fanadinana hahazoana fanamarinana ho an’ireo mpandika teny amin’ny fitambarana fiteny 03. Ny fananana Fanamarinana avy amin’ny AATIM dia ahafahan’ny mpandika teny mampiseho ara-tahirin-kevitra ny fahaizan’izy ireo amin’ny fitambarana fiteny voafaritra manokana.
Fivoriana isan-taona. Ny fivorian’ny AATIM lehibe indrindra dia atao isan-taona eto Antananarivo. Ny fivoriana dia miompana amin’ny atrikasa, fianarana, tsenan’ny asa, ary hetsika mapifanerasera.
(Fe-potoana fiasana 2020-2022)
Adiresy mailaka: haganiainaharijaona@gmail.com
Adiresy mailaka: erickspari@gmail.com
Adiresy mailaka: holykristiana@gmail.com
Adiresy: CM 37 Malaza Ampitatafika ANTANANARIVO 102, MADAGASCAR.